Vatema mwari anthology - Afrikhepri Fondation
Five Percenters vanodzidzisa kuti vanhu vatema zvakaringana, uye nhamba yenyika yose zvakanyanya, inogona kukamurwa mumapoka matatu:
-A85, avo vari vanhu vanozvininipisa, matsi, mupfumi, uye vanofufurira chokwadi pamusoro pavo uye nyika yavanogara.
-I10%, iyo inonzwisisa zvinhu zvakawanda nezvechitendero chavo, zvematongerwo enyika, varaidzo, zvehupfumi, nedzimwe nzira.
-Kuedza 5% ndivanaani avhenekerwa vanozvarwa naMwari Kuva Repossessed Kuziva chokwadi Nezveshoko nheyo upenyu uye pakuzvichengetedza, uye tsvaka nokusunungura zviripiswe mutero noutsinye 85% kuburikidza nedzidzo.
Izvo zvikamu zvataurwa hazvifananidzi kuti zvive zvakarurama asi zvinotarisirwa kuti zvimiririre vanhu vose, vatungamiriri vezvitendero uye vezvematongerwe enyika, uye vashomanana vanyatsojekesa vanhu panyika, maererano.
Nhamba dzinoshandiswa kurondedzera zvikamu zvezvikamu izvi zvitatu uye kunzwisiswa zvizere uchishandisa mutauro weSupreme Mathematics.
National Consciousness: Ruzivo rweNyika ruzivo rwekubva kwedu munyika ino, iyo inobva kuna Mwari.
Senguva yevanhu isu tiri vekutanga kunepo uye mamwe marudzi ose anobva kwatiri.
Ruzivo rweNyika nderokuziva kweruzivo rwemhando uye tsika dzevanhu vemaNyika uye mimwe michero isina kufanirwa yatakaita kuhupenyu hwepasi rose, kuburikidza kuva madzitateguru nemadzimai ehupfumi.
National kuziva ndiko kuziva kuti tose tiri umwe vanhu Pasinei yedu nenzvimbo mavambo uye kuti tinofanira kushanda uye kutambura somunhu kana tiri kuzosunungura Kuzvidzidzisa kubva kutonga pamusoro kunze simba uye avepo Universal Hurumende Love, Rugare Nomufaro nokuti vanhu vose panyika.
Community Control: Kurongeka kwevanhu vekudzidzisa, zvezvematongerwo enyika, ezvematongerwe enyika, ezveshizha uye ezvehutano masangano munzvimbo yedu.
Chikumbiro chedu cheMutungamiri weMunharaunda chinopera zvakasununguka kubva ku sayenzi yehupenyu, iyo inotidzidzisa kuti isu tiri Hukuru hwepamusoro mukati memunhu uye tiri vatongi chete vezvichaitika zvedu; saka tinofanira kuva nehutano hwakafanana pamusoro pehuwandu hwevanhu vatinoshingaira kuti tiwane pane mumwe munhu.
Ndicho chinhu chinodiwa kuti tirarame kuti tinotarisira hupenyu hwenyika uye tinohuchengetedza.
Chero bedzi patakazadzikisa Kudzora kweMudzimai kwekwanisi kuchakwanisa kuratidza kunyika uye ukuru hweMwari wedu, iyo ndiyo Rusununguko.
Peace. Rugare kusavapo kwekuvhiringidzika uye kusavapo kwekuvhiringidzika ndiyo Mutemo.
Mutemo uye Kurongeka ndiyo nheyo yeScience of Life zororo.
Dzidzo yeMatongerwoti ndiyo Mutemo uye Mutemo weZvenyika, iyo iScience of Islam, iyo iri Rugare.
Runyararo Rukuru Kunzwisisa pakati pevanhu kuti vabatsire vose.
Tichazadzika Rugare, matiri, munharaunda dzedu, munyika yedu uye munyika. Ichi ndicho chinangwa chedu chikuru.
Vanhu vemavara ndivo vanhu vokutanga vepasi pano.
Izvo vanhu Vemafuro ndivo madzitateguru uye vanaamai vemagariro.
Kuti sayenzi yeSupreme Mathematics ndiyo inokosha yeku kunzwisisa
hukama hwemunhu kune zvakasikwa. Islam inzira yakasikwa yehupenyu, kwete chitendero.
Kuti dzidzo inofanira kuumbwa kuti ishandiswe sevanhu.
The Black Man ndiye Baba veChivilization
Vashaya vakagadzira mararamiro ekutanga.
Munyika yose yekare uye yekare, Vashaya vave vakavamba vevose vanozivikanwa nevematongerwo enyika.
• mazana emakore ekutanga eChina chekare,
• ma-pre-Hellenic Minoan neMiccenean civilizations ayo akashandura Girisi yekare neRoma,
• vaIjipita vekare zvechokwadi.
• vaKaradhea vekare, veBhabhironi, vaSumerian, nevamwe vavakidzani vavo vekuEastern,
• VaKushiti nezvimwe zviri pachena kuchena kwekunyama munyika ino inonzi Africa,
• maOlmecs, avo vekutanga veMayans nedzimwe nhepfenyuro dzemaBlack Pre-Columbian dzeAmerica (kusanganisira Black Indians Columbus anoisa mafambo ake epakutanga pano),
• yekare Black civilizations yemupata weIndus muIndia,
• uye Black Civilizations yekare yeEurope.
Mutema Munhu ndiye Tsime reKudzidza Kwenyika
Kusvikira panguva yekuedza kwevanhu veEurope kusvibisa kukwanisa kweVatema
rinopfuura vanhu vose nemarudzi muuchenjeri hwake uye njere.
Vadzidzisi Vakadzi veEkare veEgypt muZvikoro Zvisinganzwisisiki.
Socrates nevamwe vaGiriki vaifunga semadzibaba eEurope filosofi vakadzidziswa pazvikoro izvi neVlacks.
Plato, mudzidzi waSocrates, akapokana nepfungwa yechiGiriki pamusoro paMwari, yaive mune vhezheni yeEuropean vamwari vevatema veEjipitori.
Plato, asina kuva naiye Mwari uye iye mupenyu, akazviratidza kusagutsikana nehukanganiso hwevanhu vevanamwari vechiGiriki vakakwirira.
VaGiriki vakanga vari, kusvikira panguva yaPlato, vachiri kurumbidza nekunamatira vanhu veMnyama varume veEgypt.
Aya echokwadi akanyorwa muGeorge GM James 'Akabiwa Nhaka naMartin Bernal's Black Athena.
Mienzaniso inosanganisira Zeus naHercules, avo vakatungamirirwa naOsiris naHorus, uye mwari Mwari Imhotep, uyo anorumbidzwa muna
chivimbiso chikuru chemishonga, Hippocratic Oath.
MaAfrica asvika muAmerica zvakanaka pamberi paColumbus